IBC 100 ရှိ 2019G မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကွန်ယက်ကိုပြသရန် Media Links | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC 100 မှာ 2019G မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးကွန်ယက်ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်မီဒီယာ Links များ
နောက်ဆုံးပေါ်ပြိုင်ကားနည်းပညာ applications များချောမွေ့စွာကျယ်ပြန့်သောဧရိယာအိုင်ပီကွန်ယက်ကိုဖြတ်သန်းမှဖွင့်, 2020 နွေရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် 2019 ရပ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ပါဝင်မှုကိုကြေညာ
မီဒီယာ Links များ®, အိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာကျော်မီဒီယာအတွက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရှေ့ဆောင် 2019.C1 ရပ်, IBC 31 မှာသူတို့ရဲ့ IP ကိုကွန်ရက်များအနှံ့ပိုမိုမြင့်မား bandwidth ကိုတောင်းဆိုချက်များနှင့်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်န်ဆောင်မှုထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန်ပါလိမ့်မယ်။
မီဒီယာ Links များ '' နည်းပညာများစတူဒီယို LAN အဖြစ်ကျယ်ပြန့်သောဧရိယာကွန်ရက်များနှစ်မျိုးလုံးကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုအဆုံးမှအဆုံးသို့အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ သူတို့ကအားလုံးအထူးသထုတ်လွှင့်မီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအခြေခံအဆောက်အဦအတွင်းက IP ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှ SDI ကနေတံတားများကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစံချိန်စံညွှန်းကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းအစွန်း, core နဲ့ထိန်းချုပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာဖြေရှင်းချက်လည်းအသစ်သောထိုကဲ့သို့သော 4K UHD နှင့်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်န်ဆောင်မှုအဖြစ် 100 Gbps ကွန်ယက်ကိုရွှေ့ပြောင်းထောက်ပံ့ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကွန်ယက်ကိုပံ့ပိုးပေးမယ့်ခြေလှမ်းကျောက်ကိုဆက်ကပ်။
အဆိုပါ 100G မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးကွန်ယက် IBC ဟန်ပြ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, မီဒီယာ Links များက၎င်း၏အသစ်အ MDX100G switching စီးရီးကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ Off-စင် COTS switches များအပေါ် အခြေခံ. ဤ devices တွေကိုအထူးပုံမှန် COTS data တွေကိုဗဟိုပြု switches များ၏အင်္ဂါရပ်-set ကိုကျော်လွန်ပြီးကောင်းစွာသွားပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာဗဟိုပြုကွန်ရက်အသွားအလာများတောင်းဆိုလိုအပ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ switching 100Gbps IP ကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတိုးတက်လာသောယုံကြည်စိတ်ချရ, ခိုင်ခံ့ပြီးမြင့်မားတဲ့ရရှိမှုနှင့်အတူ switching မီဒီယာပိုကောင်းအောင်မြောက်မြားစွာထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေ, မစ်ရှင်-အရေးပါသောမီဒီယာလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုလိုအပ်သောအတွက်အဓိက COTS ဒီဇိုင်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 100G မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကွန်ယက်တွင်အစွန်းကိရိယာများအဖြစ်လည်ပတ်, အ MDP3000 စီးရီးမှ / ရဲ့ IP ကွန်ယက်၏အဖျားအနားမှာထံမှဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်အချက်အလက်ပို့ဆောင်ရေးသည်။ အိုင်ပီမီဒီယာ Gateway ၏ဤ suite ကိုလည်းထောက်ခံပါတယ် SMPTE ST2110, 4K UHD အဖြစ် TICO, JPEG-ULL နှင့် JPEG,-XS ချုံ့။
ဝန်ဆောင်မှုအာမခံချက်, ယာယီနေရာချထား, အချိန်ဇယားဆွဲအဖြစ်စွမ်းဆောင်ရည် / နှိုးဆော်သံစီမံခန့်ခွဲမှုအပါအဝင်အားလုံးကွန်ရက်ကလှုပ်ရှားမှုများ orchestrating, အ Sdn (software ကိုသတ်မှတ်ကွန်ယက်ကို) controller ကိုအဖြစ် IBC ဟန်ပြ, ProMD-EMS software ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်ရှာနိုင်ပါတယ်။
မီဒီယာ Links များသည်လည်း၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်အစုစုကိုနောက်တဖန်တိုကျို, ဂျပန်၌အ 2020 နွေရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ကိုလည်းဂျပန်အတွက် 2019 ရပ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အသုံးပြုသွားမည်လိမ့်မည်။
မီဒီယာ Links များရပ်တည်ချက် 2019.C1 အပေါ် IBC 31 မှာဖြစ်လိမ့်မည်။
100G switching ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor MDP3000 MDP3040 MDX100G မီဒီယာ Links များ SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-05
ယခင်: IBC 8 မှာ Lynx Technik မိတ်ဆက် yellobrik 2019K Fiber Transmission ဖြေရှင်းချက်
နောက်တစ်ခု: IBC2019: အသံလွှင့် Pix မိတ်ဆက် RadioPix Visual ရေဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်